Kushanda kweiyo ultrasonic vibrating probe mune yakachena
Kushanda kweiyo ultrasonic vibrating probe mukuchenesa: Nekuda kweiyo yakasarudzika dhizaini yekutenderera chubhu mhando, ultrasonic vibrating probe inonyanya kukodzera kuchenesa ese marudzi emapombi. Nheyo yacho ndeyekushandura simba remagetsi kuita simba re ultrasonic uye kuendesa kune chiyero uye kudiridza accordin ...
Kushanda kweiyo ultrasonic yekucheka tekinoroji mune zvemagetsi zvigadzirwa
Abstract: Ultrasonic tekinoroji inoshandiswa zvakanyanya muindasitiri. Iri bepa rinosuma musimboti wekucheka kweiyo ultrasonic, uye wobatanidza iyo mienzaniso yezvimwe zvigadzirwa zvemagetsi kuti uenzanise mhedzisiro yekugadzira michina nekucheka laser, uye kudzidza mashandisirwo eiyo ultrasonic yekucheka techn ...
Kushanda kwe ANSYS Parameter Optimization uye Pamwe Dhizaini pane Ultrasonic Welding runyanga
Mashoko Ekutanga Nekuvandudzwa kweiyo ultrasonic tekinoroji, mashandisirwo ayo akawedzera uye akawedzera, inogona kushandiswa kuchenesa tunhu tudiki tudiki, uye inogona zvakare kushandiswa mukuwisira simbi kana plastiki. Kunyanya mune yanhasi mapurasitiki zvigadzirwa, Ultrasonic Welding inowanzoshandiswa, nekuti iyo scre ...
Iwe unonzwisisa here iyo Ultrasonic Impact Kurapa?
Iwe unonzwisisa here iyo Ultrasonic Impact Kurapa? Yakakwira Frequency Mechanical Impact (HFMI), inozivikanwawo seUltrasonic Impact Kurapa (UIT), iri yepamusoro-frequency weld inobata kurapwa yakagadzirirwa kugadzirisa kuneta kuramba kwe ...
Maitiro ekugadzira iyo Dhizaini yeiyo ultrasonic kutenderera
Mashandisiro ekushandisa FEM ANSYS paramende optimization uye ingangoita dhizaini yeiyo ultrasonic yekutenderera nyanga